Miely ny feo eny Tsimbazaza fa misy miketrika hanongana ny birao maharitra. Anisan’ny tsy levon’ny depiote sasany ny tombony azon’ireo naman’izy ireo, toy ny fivoahana any ivelany sy ny vola 30 tapitrisa Ar ho azy ireny. Eo koa ny fahabangan’ny seza matetika ao an-dapa amin’ny fivoriana nefa tsy maka andraikitra momba izany ny birao maharitra. Tsy mampandeha ny raharaha eny anivon’ny Antenimiera izany ka nahatonga ireto andiana depiote ireto mihevitra ny hanilika ireo birao maharitra.
Niara-niombom-bavaka teny amin’ny FJKM Anatirova, omaly, ireo delegasion’ny parlemantera alemà, mitsidika sy mandalo eto amintsika. Tafiditra amin’ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta izany. Efa niara-nivavaka tahaka izao rahateo ny filoha Rajaonarimampianina, niatrika izany teny an-toerana sy ireto parlemantera vahiny ireto, fony ny filoha nitsidika tany Alemaina.
Homena andraikitra amin’ny fifidianana ny tanora. Vita sonia, omaly, teny Alarobia ny fiaraha-miasan’ny Ceni sy ny minisiteran’ny Tanora ho fanentanana sy fanabeazana momba ny fifidianana hampandraisana anjara ny tanora eo amin’ny zotram-pifidianana. Anisan’ny anton’izany ny tatitry ny OIF maneho fa vitsy ireo tanora mpifidy latsaky ny 35 taona voasoratra anarana anaty lisi-pifidianana.